म्याद बढाइएको हो ? - Shikshak Maasik
by • • जिज्ञासा जवाफ • Comments (0) • 3299
शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा तालिम नलिएका तर पढाइरहेका शिक्षकलाई दिएको अध्यापन अनुमति पत्र २०६९ कात्तिक २२ गतेसम्म तालिम नलिए स्वतः रद्द हुने जनाएको थियो । तर हाल उक्त अनुमतिपत्रको समय अवधि दुई वर्ष थपिएको भन्ने सुनिएको छ । सत्य कुरा के हो ?
रत्न प्रावि, वीरबास, गुल्मी
तपाईंले सुनेको सही हो । शिक्षक सेवा आयोगले त्यस्ता अध्यापन अनुमति पत्रको माथिपट्टि नै ‘२०६९ कात्तिक २२ गतेसम्म तालिम पूरा नगरेमा यो अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले शिक्षा सेवा आयोगको नियमावलीमा गरेको पछिल्लो संशोधनमा त्यस्ता अध्यापन अनुमति पत्रको समयावधि थप दुई वर्ष बढाएर २०७१ कात्तिक २२ गतेसम्म कायम गरेको छ । यस अनुसार तालिम नलिई अध्यापन अनुमति पत्र पाएका कार्यरत शिक्षकले अब २०७१ कात्तिक २२ गतेसम्म तालिम पूरा गर्नुपर्ने छ ।
उपसचिव शिक्षक सेवा आयोग
बिरामी विदा रकम पाइएला ?
मैले २०५० साल जेठ १७ गतेदेखि २०६० साल चैत महीनासम्म १० वर्ष अस्थायी सेवा गरेकी छु । १० वर्षको बिरामी विदा पनि प्रमाणित गरेर राखेकी छु । मैले जागीर छोड्दा अस्थायी अवधिको बिरामी विदाको पैसा पाउँछु कि पाउँदिन ?
दुर्गादेवी प्याकुरेल, जालपादेवी प्रावि
शुरूको अस्थायी नियुक्ति पत्र; जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको नियुक्ति समर्थन र कार्यरत विद्यालयबाट विदा प्रमाणित भएको पत्र छ भने तपाईंले अस्थायी सेवा अवधिको पनि बिरामी विदाको रकम पाउनुहुन्छ । यस्तो रकम अस्थायी सेवा अवधिको अन्तिम तलब स्केलका आधारमा शिक्षक किताबखानाले दिंदै आएको छ । तर त्यसनिम्ति माथि भनिएका कागजात भने तपाईंसँग हुनै पर्छ ।
२०५७ साल साउन १ भन्दा अघि स्थायी नियुक्ति भई, प्राविधिक वा सो सरह तलब भत्ता खाईपाई आएको शिक्षकलाई एक श्रेणी बढुवा भएपछि पहिला खाईपाई आएको दुई ग्रेड नदिएकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको पत्रका आधारमा २०६८ साउन महीनाबाट पुनः उक्त ग्रेड दिन शुरू गरिएको थियो । तर विद्यालय शिक्षक किताबखानाको २०६९ चैत १ को पत्रानुसार सो ग्रेड तोक्ने वा समायोजन गर्ने निकाय शिक्षक किताब खाना हो भनिएको छ । अब मैले महालेखा परीक्षकको पत्रका आधारमा पाउँदै आएको ग्रेड पाउन के गर्नुपर्ला ? अनि निजामती कर्मचारीले चाहिं यस्तो सुविधा पाउने अनि हामी शिक्षकले किन नपाउने ?
मित्रता उमावि, सत्रसय, तनहुँ
यदि तपाईंले २०५७ साल साउन १ गते अघि स्थायी नियुक्ति पाउनुभएको हो र तालिम पनि लिनुभएको छ भने तपाईंले पाउँदै आएको दुई ग्रेड रोकिंदैन, सो मिति अघि स्थायी नियुक्ति र तालिम नपाएको अवस्थामा भने यस्तो सुविधा पाइँदैन ।
उपनिर्देशक, शिक्षक किताबखाना
अदालतको आदेश भइसकेको छ
म २०४५ साल जेठ १३ गते प्रावि तृतीय श्रेणीमा नियुक्त स्थायी शिक्षक हुँ । २०६२ सालमा प्रावि तहको द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएको हुँ । मैले अहिले ९ ग्रेड खाइरहेको छु । तर, मभन्दा पछि २०४६ र २०५० सालमा सोही तहको सोही श्रेणीमा नियुक्त म जस्तै शिक्षकहरूले २०६८ सालमा बढुवा भई ११ ग्रेड खाइरहेका छन् । यसरी मभन्दा पछिका शिक्षकहरूको ग्रेड कसरी बढी हुन गयो ?
माध्यमिक विद्यालय, वालपुर, दाङ
मौजूदा तलब स्केलका कारण शिक्षकको ग्रेडमा यस्तो अन्तर देखा परेको हो र यो धेरै शिक्षकको साझ समस्या हो । तपाईं जस्तै समस्या भोग्दै आएका सुनसरीका शिक्षकहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा ग्रेडमा रहेको यस्तो असमानता हटाउन आदेश पनि दिइसकेको छ । उक्त आदेश कार्यान्वयन भएपछि ग्रेडमा रहेको विभेद अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सिटरोल परिवर्तन कसरी गर्ने ?
म र मेरी श्रीमती २०६० सालमा स्थायी भएका शिक्षक हौं । हामीले सिटरोल फारम भर्दा श्रीमान्ले श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमान्लाई शेषपछिको हकवाला वा इच्छाएको व्यक्ति राखेर पठाएका छौं । दुवैजना स्थायी शिक्षक भएकोले शेषपछिको हकवाला श्रीमान् श्रीमतीको र श्रीमती श्रीमान्को हकवाला बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन । यदि पाइँदैन भने सिटरोल फारम परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ला ?
जाल्पादेवी प्रावि, मयाँखु–९, उदयपुर
कानूनतः कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो पेन्सन सुविधा लिन पाउँदैन । तपाईंहरू स्थायी शिक्षक भएकोले सेवा निवृत्त भएपछि दुवै जनाले आ–आफ्नो पेन्सन खान पाउनुहुनेछ; दोहोरो पेन्सन सुविधा भने पाउनुहुन्न । जहाँसम्म सिटरोल परिवर्तनको कुरा छ, शेषपछिको हकवालासँगको नाता प्रमाणित गरी कार्यालयको सिफारिश सहित शिक्षक किताबखानामा निवेदन दिनुपर्छ । सोही आधारमा किताबखानाले शेषपछिको हकवाला परिवर्तन गर्छ ।
लाइसेन्समा दुइटा नम्बर किन ?
मेरो शिक्षण अनुमति पत्रमा दुई वटा नम्बर ऋ–२७२१६३÷२२६७६९ लेखिएको छ । मैले यी दुई वटा नम्बरमध्ये कुनचाहिं लेख्ने ? वा दुई वटै लेख्ने ?
गणेश मावि, भीमखोरी–८, काभ्रे
हाम्रो रेकर्डमा तपाईंको लाइसेन्समा दुई वटै नम्बर रहेको देखिन्छ । तर, तपाईंले भनेको लाइसेन्स नम्बर र हाम्रो रेकर्डको नम्बरमा एउटा अंक फरक परेको छ । त्यसकारण लाइसेन्समा कुन नम्बर राख्ने भन्ने निधो गर्नका लागि आफ्नो लाइसेन्सको सक्कल प्रति सहित आयोगको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।
बढुवा हुन्छ कि हुँदैन ?
२०३३ असार ७ गते प्राविको स्थायी शिक्षक भएको हुँ । प्रावि द्वितीयमा मेरो बढुवा २०६८ मंसीर ११ मा भएको हो । मेरो शैक्षिक योग्यता एसएलसी मात्र छ । अब अवकाश हुँदा मेरो एक तह बढुवा हुन्छ कि हुँदैन ।
प्रावि उखाडी, जुम्ला
शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ‘विशेष वढुवा’ सम्बन्धी प्रावधान शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेपछि एकपटक पनि बढुवाको अवसर नपाएका शिक्षकका लागि मात्र हो । तपाईंले शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेपछि एक पटक बढुवाको अवसर पाइसक्नुभएको देखिएकोले अवकाशअघि अब फेरि बढुवा पाउने सम्भावना देखिंदैन ।
बढुवामा पक्षपात भएन र ?
सुनसरी जिल्लाको मावि द्वितीय श्रेणीको २०६९ सालको बढुवा प्रतिस्पर्धाको रिजल्ट प्रकाशित भएपछि उजुरी प¥यो । उजुरीको छानबिन पश्चात् प्रकाशित रिजल्टमा आकाश जमीनको अन्तर भयो । पहिले एक नम्बरमा रहेको नाम पाँचमा पुग्यो र एउटा नाम काटिएर अर्को नाम थपियो । यो घटनाले गर्दा शिक्षकहरूको मनमा शिक्षक सेवा आयोगप्रति पनि अविश्वास पैदा हुन थालेको छ । के भएर यस्तो गल्ती भयो ?
सरस्वती मावि, बविया–१, सुनसरी
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा (७५ प्रतिशत बढुवा) को नतीजा प्रकाशन हुन्छ । त्यस्तो नतीजामा कसैको चित्त नबुझ्ेमा उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवाका लागि आवेदन फारम भरेका सबै उम्मेदवारलाई क्षेत्रीय बढुवा समितिले दिएको अंक जानकारी होस् भनेर आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आफूले पाएको अंकमा चित्त नबुझ्े जोसुकैले आयोगमा उजुरी दिन सक्छ । आयोगले छानबिन गर्दा कासमुमा अंक दिंदा जिल्ला तथा क्षेत्रीय तहमा त्रुटि भएको फेला परेमा नतीजा संशोधन गरेर प्रकाशित गर्ने गरिएको छ । सुनसरीको घटनामा पनि त्यही भएको हुनुपर्छ ।
राहतको सेवा अवधि कति हो ?
राहत शिक्षकको अवधि कहिलेसम्म हो र विदाको सुविधा के कति हो ? राहत शिक्षकको बारेमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा केही उल्लेख गरेको पाइँदैन, किन होला ?
गार्गी मावि, बन्दीपोखरा–२, पाल्पा
शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक सरहको भैपरी आउने विदा, पर्व विदा, बिरामी विदा, सुत्केरी विदा, प्रसूति स्याहार विदा र किरिया विदा पाउँछन् । राहतको सेवा अवधिका बारेमा अहिलेसम्म कुनै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुनसकेको छैन ।
दिनेश श्रेष्ठ, उपनिर्देशक, विद्यालय व्यवस्थापन शाखा (प्राथमिक) शिक्षा विभाग
प्राविधिक ग्रेड प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला ?
हामी तालीमप्राप्त स्थायी शिक्षक हौं । हामीले २०६६ सालसम्म प्राविधिक स्केल खाँदै आएका थियौंंं । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा प्राविधिक ग्रेड थप २४० निकासा भई खायौं । तर आव २०६९÷७० को २४० थप ग्रेड निकासा भएन । छूटमा माग गर्दा जिशिका सुर्खेतका लेखापालले शिक्षक किताबखानाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकोले शिक्षक किताबखानामा पठाएका छौं भन्नुभएको छ । अब हामीले प्राविधिक ग्रेड २४० प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला ?
भक्तबहादुर थापा÷चन्द्रा भण्डारी न्यौपाने
नेरा निमावि, चिसापानी सुर्खेत
शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट पारित गराएर मात्र शिक्षकको तलब तथा ग्रेड निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रतिवेदन पारित गर्दा बढी निकासा गएको भए कटाएर तथा कम निकासा भएको भए थपेर निकासा दिनुपर्छ । यसका लागि तपार्इंले जिशिकामै सम्पर्क राखेर तलबी प्रतिवेदन अनुसार आफूले पाउनुपर्ने रकम निकासाका लागि पहल गर्नु उचित हुन्छ ।
उपसचिव, कार्यक्रम तथा बजेट शाखा